Ny Minisitry ny raharaham-bahiny lasa kandida ben’ny tanàna, ka ny Praiminisitra no miantsoroka vonjimaika ny toerany. Isan’ireo minisitera iankinan’ny fiandrianam-pirenena anefa io. Tao anatin’ny 9 volana, dia masoivoho any ivelany 4 no voatendry.Tsy misy vola ny fanjakana satria tsy maharesy lahatra ny mpiara-miombon’antoka, hany ka ny eo no ezahina havadibadika, hahafaha-manodina ny firenena aloha.Noroahina ny mpiasa tsy raikitra, nahena ny tetibolan’ny andrim-panjakana,…Mandeha ny pimaso amin’ny mpamatsy vola amin’ny fanehoana fa miady amin’ny kolikoly mba hahafahana mahazo famatsiam-bola, saingy miharihary ny fitanilana na ekena aza fa misy ny fampiharana lalàna. Mahagaga anefa fa fotoan-dehibe ny fivorian’ny firenena mikambana any New York, saingy toa nodian’ny filoha adala. Matahotra ny ho voatehamaina, toy ny tany amin’ny 10 taona lasa ve? Dia inona ihany izany no hatao amin’ity hambo-po diso toerana lava ity toy ilay hoe tsy mila fanampian’ny mpamatsy vola mahazatra?Tsy afaka ny hiala bala na hanilika rihitra any amin’ny hafa intsony satria efa manjaka tokana.Matoa nanao ny farahery sy nanao ny tsy fanao hatrany tamin’ny fandrombahana io fahefana io, dia tokony ho tahaka izany ihany koa ny hafainganana amin’ny fitondrana rivo-baovao sy fivoarana ho an’ny firenena. Hatreto, toa mbola tsy ampy angamba ny fahefan’ny filoha hampandroso sy hanarina an’i Madagasikara, sa ve miandry fahagagana ?